Nhengo dzeMDC Dzinorohwa Nemapurisa Mushure Mekuratidzira muHarare
Ndira 23, 2008
MuHarare maita mhirizhonga neChitatu mushure mekunge mapurisa ange aine zvombo aedza kudzivirira zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, kuti vasaite hurongwa hwavo hwe Freedom Walk.
Vanhu vakawanda vanosanganirira munyori anoona nezve kufambiswa kwemabasa ezve matongerwo enyika, Engineer Elias Mudzuri, pamwe na Organising Secretary weHarare Province, VaPaul Madzore, vasungwa mubongozozo iri.
Ukuwo VaTsvangirai, sekutaura kuri kuita Irwin Chifera, vambotorwa ndokuchengetedza nemapurisa mambakwedza eChitatu.
Zvichakadaro, nhengo dze MDC dzinosvika makumi matatu nevanomwe, dzakuvadzwa pabongozozo raitika muHarare iri. MDC inoti vanhu ava vakuvadzwa apo mapurisa atanga kurwisana nevanhu vanga vauya kumusangano webato ravo kuGlamis stadium.
Vaona vanhu vakuvadzwa apo vaendeswa kuAvenues Clinic, vati vanhu ava vanga vachierera ropa rakawandisa. Asi mumwe chiremba anorwira kodzero dzevanhu, Dr Douglas Gwatidzo, vanova zvakare sachigaro ve Zimbabwe Doctors Association of Human Rights, vaudza mutori wenhau weStudio 7 kuti vachiri pakati pekuongorora kuti vanhu ava vakuvara zvakadii.
Mutauriri weMDC VaNelson Chamisa, vaudza mutori wenhau weStudio 7 Carole Gombakomba kuti vari kushushikana nekuti nhengo dzavo dzarohwa, idzo dzisina kudenha mapurisa.
Tichiri panyaya ye MDC, vamwe vambochengetedzwawo pamwe naVaTsvangirai mangwanani eChitatu, vanosanganisira munyori wezve sarudzo, VaIan Makone, pamwe naVaDennis Murira vanova national director of elections.
Blessing Zulu weStudio 7, abata VaMurira kuti tinzwe zvaitika.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, Professor John Makumbe, vanoti kusungwa kwaVaTsvangirai uye zvaitwa nemapurisa, zvinoratidza pachena kuti nhaurirano dziri kutungamirwa nemutungamiri we South Africa, VaThabo Mbeki, hadzina chadzavandudza.
Blessing Zulu aita zvakare hurukuro na Doctor Lovemore Madhuku sachigaro ve NCA, uye vachiongorora zvematongerwo enyika kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi.